တစ်လကိုဝင်ငွေ ၈ သိန်းရှိသူတွေ အိပ်မက်ထဲကကားလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ တစ်လဘယ်လောက်စုရမလဲ
အိပ်မက်ထဲက ကားလေး ဝယ်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ရှိတယ် ဆိုပေမယ့် ဘယ်လို ငွေစုရမယ်၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဝယ်ရမယ်ဆိုတာ အသေးစိတ် အစီအစဉ်မချရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီစာကို ဆက်ဖတ်ဖို့လိုပါပြီ။
သင်က တစ်လကို လစာဝင်ငွေ (၈)သိန်းရတယ်ဆိုပါစို့!
လာမယ့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Suzuki Swift GLX လေးတစ်စီး ဝယ်ဖို့ရည်မှန်းထားမယ်ပေါ့။
အရင်ဦးဆုံး Suzuki Swift GLX တစ်စီးရဲ့ တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲ? ကနဦးငွေဘယ်လောက်ပေးရမလဲ? ဘယ်နှစ်နှစ်အထိ အရစ်ကျ ဝယ်လို့ရမလဲဆိုတာကို တွက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် ။
ကားတန်ဖိုးက (၂၀၉)သိန်းဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေခွန် ၃% ဖြစ်တဲ့ (၇)သိန်းထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင် စုစုပေါင်း (၂၁၆)သိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ကနဦးပေးသွင်းငွေအနေနဲ့ ကားတန်ဖိုးရဲ့ ၁၀% ပေးသွင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ၂၁သိန်း ၆သောင်း ကျသင့်ပါမယ်။
စုစုပေါင်းပေးရမယ့် (၂၁၆) သိန်းထဲက ကနဦးပေးသွင်းငွေ ၂၁သိန်း၆သောင်းကို နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ၁၉၄ သိန်း၄သောင်း ၄ထောင် ပေးသွင်းဖို့ကျန်ပါမယ်။
အဲဒီပမာဏကို (၅)နှစ်အရစ်ကျနဲ့ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် တစ်လကို ၃သိန်း၂သောင်း၄ထောင် ပေးသွင်းရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဒါဆိုရင်ဒီ ကနဦးနဲ့ လစဉ်ပေးသွင်းသွားရမယ့်ငွေအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေအပေါ်ကနေ ဘယ်လိုစုဆောင်း ရမလဲဆိုတာကိုဆက်တွက်ကြည့်ကြရအောင်။
ပထမဆုံး ကနဦးပေးသွင်းငွေ ၂၁သိန်း၆သောင်းအတွက် လက်ထဲမှာ ငွေအလုံးအရင်းနဲ့မရှိထားဘူးဆိုရင် ဒီအတွက် စတင်စုဆောင်းရပါမယ်။ ဒီအတွက် သင့်ရဲ့လစဉ်ဝင်ငွေထဲကနေ တစ်လကို ၁သိန်း၈သောင်းကျပ် ပုံမှန်ဖယ်ပြီး စုဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒီပမာဏလောက်ဆိုရင် နေ့စဉ်၊ လစဉ်အသုံးစရိတ်ထဲကနေ ပုံမှန်လေးချွေတာသွားပြီး စုလို့ရနိုင်တာကြောင့် အခုလိုအကြံပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစုသွားနိုင်မယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါလက်ထဲမှာ ၂၁ သိန်း ၆ သောင်းရှိလာမှာပါ။
အဲဒီလို ကနဉီးပေးသွင်းငွေလက်ထဲမှာရှိလာပြီဆိုရင် လစဉ် ၅ နှစ်အရစ်ကျပေးသွင်းရမယ့်ငွေကို ပုံမှန်ပေးသွင်းနိုင်ဖို့ဆက်ပြီးတွက်ချက်ရပါမယ်။ ဒီအတွက် ဝင်ငွေ (၈)သိန်းထဲက အိမ်အသုံးစရိတ်ကစလို့ တခြားလိုအပ်တာတွေဝယ်ဖို့ငွေအပြင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆိုင်ထိုင်ဖို့အထိ ကုန်လောက်မယ့် ပိုက်ဆံကို ကြိုတင်တွက်ချက်ပြီး ဖယ်ကြည့်ထားသင့်ပါတယ်။ (၅)နှစ်လုံးမှန်မှန်ပေးသွင်းသွားနိုင်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ ဝင်ငွေ (၈) သိန်းထဲက ၃သိန်း၅သောင်း လောက် အပိုငွေချန်သွားရမှာပါ။
(၅)နှစ် အရစ်ကျ ပေးချေရမယ့် စုစုပေါင်းငွေက ၁၉၄ သိန်း၄သောင်း၄ထောင် ဆိုတော့ တစ်လ ၃သိန်း၂သောင်း၄ထောင်နဲ့ လပေါင်း(၆၀)ပေးချေသွားနိုင်မယ်ဆိုရင် အိပ်မက်ထဲကကားလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားလေးလိုချင်ပေမယ့် ကားတန်ဖိုးက သိန်းရာကျော်ဖြစ်နေလို့ မတတ်နိုင်ဘူး၊ မစုနိုင်ဘူး တွေးပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ လစာ ဝင်ငွေထဲကနေ ပုံမှန်အသုံးစရိတ်တွေကို ချွေတာပြီး တစ်နှစ်လောက် ကနဦးပေးသွင်းငွေအတွက်စုဆောင်း၊ ကျန် ၄ နှစ်မှာလစဉ်မှန်မှန် ပေးသွင်းသွားလိုက်မယ်ဆိုရင် အိပ်မက်တွေကလက်တစ်ကမ်းမှာတင်ရှိပါတယ်။
ကဲ Suzuki Swift GLX ကားကို ကနဦးငွေ ၁၀% နဲ့ (၅)နှစ်အရစ်ကျဝယ်ဖို့ အခုပဲ အောက်က ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ဆက်သွယ်ပြီး စုံစမ်းဆွေးနွေးနိုင်ပါပြီ။